Ndị na-emepụta akụrụngwa biya biya China Beer Brewing Equipment Factory & Suppliers
Akụrụngwa Beer Brewing Equipment
Ezigbo ihe na-eguzogide abrasion
N'ime-Jaketị (SUS304) ọkpụrụkpụ: 3.0mm
Mpụga-jaket ọkpụrụkpụ: 2.0mm
Akara isi gbara ọkpụrụkpụ: 3.0mm
Aha ngwaahịa: 20000L Vertical Bright Beer Tank BBT, tankị na-egbuke egbuke, tankị tankị na-arụ ọrụ, tankị na-eje ozi, tankị na-a conditioningụ mmanya biya, tankị nchekwa biya - ndị a bụ okwu ndị a na-ahụkarị, gụnyere otu klas nke ụgbọ mmiri pụrụ iche iji kwadebe carbonated. biya tupu ite ya, na-ejuputa n'ime akpa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. A na-esi na tankị biya ma ọ bụ tankị cylindrically-conical na-eme ka biya biya dị ọcha dị na tank tank na-echekwa mmanya ...
Usoro ọgwụgwọ mmiri maka ebe omume biya
Mmiri dị na mba ahụ dịgasị iche iche ma mmiri ahụ ga-enwe mmetụta kpọmkwem na uto biya ahụ. Ekwesiri ịtụle ike, nke mejupụtara calcium ion na magnesium. Ọtụtụ ndị na-eme biya dị ka mmiri nwere ma ọ dịkarịa ala 50 mg / l nke Calcium, mana ọtụtụ nwere ike bụrụ ihe na-emebi ihe na-atọ ụtọ n'ihi na ọ na-ebelata pH nke mash. N'otu aka ahụ, obere Magnesium dị mma, mana oke oke nwere ike ịmepụta uto ilu. 10 ruo 25 mg / l nke manganese bụ ihe na-achọsi ike.
Draft Beer igwe
A beerụ biya, nke edepụtara ede, bụ biya a na-esite na akpati ma ọ bụ keg karịa na karama ma ọ bụ na mkpọ. A na-akpọkwa biya biya a na-etinye na keg na-arụ ọrụ dị ka biya.
Mpempe biya bụ valvụ, ọkachasị mgbata, maka ịchịkwa ịhapụ biya. Ọ bụ ezie na ụdị ọkpọ mmiri ndị ọzọ nwere ike ịkpọ ụrọ, valvụ ma ọ bụ spigot, iji mmanya maka biya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile.
Ntinye biya site na kandụl diatomaceous ụwa filter bụ ihe ngwọta kasịnụ nke nzacha na microbrewery nke ọkara na nnukwu nha.
Air Compressor usoro
Na mgbakwunye na ịsa nhicha na ịmị / mkpọ, ikuku compres na-abụkwa ngwaọrụ bara uru maka ọrụ ndị ọzọ na ebe a na-eme biya. Aeration bụ usoro dị mkpa n'ịmepụta, nke gụnyere itinye oxygen na yist n'oge gbaa ụka. A na-ejikwa ikuku na-arụ ọrụ iji rụọ ọrụ igwe n'oge usoro nkọwa.